Raiisalwasaare Cumar Cabdirashiid oo Sheegay in Maraykanka kala hadlay Wax u qabashada Qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen | SAHAN ONLINE
Raiisalwasaare Cumar Cabdirashiid oo Sheegay in Maraykanka kala hadlay Wax u qabashada Qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen
Raiisalwasaaraha dalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo xiligaan dalka Maraykanka ku sugan ayaa sheegay in dawladda kala hadleen sidii ay kaalinta uga geysan lahayd Taakuleynta Qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen.
Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa sheegay in dadka Soomaalida ah ee jooga Yemen ay haysato dhibaato xoogan ayna yarayn dadaalka ay Dawladu ugu jirto Samatabixinta dadka Soomaaliyeed.
Waxa uu sheegay in qulqulka Qaxootiga Soomaaliyeed ee ka imaanaya dalka Yemen ay ka casbi-qabaan iney kusoo dhex dhuuntaan kooxo ka tirsan dagaalyahanada Islaamiyiinta ah ee dalkaas jooga.
“Waxaa jirta cabsi aan ka qabno in kooxaha xagjirka ah ay Soomaaliya u gudbaan sidoo kalena uu hub ka gudbay Yemen uu gaaro Soomaaliya..”ayuu yiri.
Dhanka kale Raiisalwasaare Cumar Cabdirashiid oo ka hadlay Tira-koob dhawaan ay soo gudbisay Wasaarada Qorsheynta ee Xukuumadiisa ayaa sheegay in taasi qiyaas ahayd balse la sameyn doono Tira-koob dhab ah.
Raiisalwasaaraha dalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa sidoo kale sheegay in dawladda Federaalka ee Soomaaliya ay ka go’antahay in dalka ka qabsoonto 2016 doorasho kana soo shaqeyn doonaan arrintan Guddiga Doorashooyinka.